Hernan Crespo ayaa markiisa xoojiyay in weeraryahanka Inter Milan ee Mauro Icardi lagu daro xulka kubadda Cagta ee Argentine ku matalaya koobka kubadda Cagta Adduunka ee sanadkan ka dhacaya dalka Ruushka. Wargeyska La Gazzetta dello Sport oo wareystay ciyaaryahanka hore ayaa sheegay in Icardi uu yahay qof aan ku wanaagsaneyn diillinta Ganaaxa hayeeshee wax kasta sameyn kara marka ay kubadda lugtiisa ...
Goolhayaha Kooxda Manchester City Ederson,ayaa dhigay rikoor dhinaca shuut ama darbada ugu dheer ah ee Buugga Guiness World Record. Ederson,waxaa uu jebiyay rikoor yaallay oo ah darbada ama shuutka ugu dheer ee uu ciyaaryahan tuuro,waxaana rikoorka yaallay uu ahaa 75 Mitir. Kooxda Man City ayaa wakiillo ka socda Buugga Guiness World Record,ku casuuntay xerada tababarka,waxaana goolhayaha la siiyay 3 jeer si uu rikoorkaas ...
Taageerayaasha Kooxda Kubadda Cagta Manchester United ayaa soo sameeyay Boor cusub oo ay ku muujinayaan sida ay u taageersanyihiin tababaraha xanuunsan ee Sir Alex Ferguson. Boorkan waxaa ku qoran “mid kasta oo naga mid ah waxaa uu jecelyahay Sir Alex Ferguson”,waxaana la suray Garoonka caanka ah ee lagu naaneyso masraxa Riyada. Taageerayaasha Man United ayaa ballan qaaday in kulanka ugu dambeeya xagaagan ...
Taageerayaasha Liverpool iyo Roma oo lacag u ururinaya Sean Cox .
Taageerayaasha Kooxaha Liverpool iyo Roma ayaa isku raacay in ay qabtaan bandhig wadajir ah oo lacag loogu ururinayo taageeraha Kooxda Liverpool ee lagu magacaabo Sean Cox ,kaas oo wali kooma ku jira. Sean Cox ,waxaa jirdil u geystay taageerayaasha Roma lugta 1aad ee Tartanka Champions League sama finalkiisii,waxaana uu galay Koomo uu ilaa hadda ku jiro. Taageerayaasha labada dhinac ayaa Axadda waxaa ...
Arsenal oo aan sanadkan qabaneyn Emirates Cup,ogow sababta?
Kooxda Kubadda Cagta Arsenal ee Dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in Sanadkan aysan qabaneyn tartanka Caanka ah ee Emirates Cup,kaas oo ay qabato sharikadda Fly Emirates ee dalka Imaaraadka Carabta . Tartankan waxaa uu ka dhacaa Garoonka Arsenal waxaana ka qeybgela kooxo loo xulo sanad kasta oo ka kala socda inta badan Waddamada Qaaradda Europe. Kooxda Gunners ayaa sheegtay in Sanadkan ...
Kulanka ugu horreeya tabababaraha beddelaya Wenger oo la shaaciyay
Kooxda Kubadda Cagta Arsenal ayaa soo bandhigtay qorshaha safarkeeda dalxiiska iyo kulamada caalamiga ah ee ay ciyaareyso. Kooxda waxaa ay kulankeeda ugu dambeeya Premier League xagaagan la ciyaareysaa Kooxda Huddersield taas oo heerka bad baadada u soo baxday kaddib markii ay labo Habeen ka hor bar barro la gashay Chelsea. Tababaraha beddelay Wenger oo aan wali la shaacin yaa la ...
Wasiir Spanish ah oo illaaway magaca Europe League!
Wasiirka Waxbarashada,Dhaqanka iyo Ciyaaraha Dalka SpainInigo Mendez de Vigo, ayaa shalay illaaway magaca tartanka Europe League ee ay ciyaarayaan Merssele iyo Atletico Madrid. Wasiirka ayaa waxaa uu u hambalyeynayay Kooxda Atletico Madrid oo tartankaas finalkiisa ciyaareysa,waxaa uu ka hadlayay sida loo qorsheynayo bandhigyada ciyaaraha ee Kulankaas dhinaca dalka Dalka Spain. Waxaa uu sheegay in Kooxda Atletico Madrid ay la ciyaareyso ...
Boqor daawanaya ciyaarta Finalka Europe League,kuma?
Kulanka kama dambeysta ah ee u dhaxeeya Kooxaha Merselle iyo Atletico Madrid ayaa waxaa ka qeybgelaya qaar ka mid ah mas’uuliyiinta ugu caansan caalamka. Dadka ka qeybgelaya ee hadda la xaqiijiyay waxaa ka mid ah Boqor Felipe 6aad ee dalka Spain,waxaa uu u safri doonaa Magaalada Lyon oo ay ka dhaceyso ciyaarta kama dambeysta ah. Boqorkan waxaa uu ka qeybgalay ...
Klose oo tababare ka noqday Bayern
Mancini oo joojinaya heshiiskiisa Zenit St Petersburg,sababta?
Tababare Roberto Mancini,ayaa la sheegayaa in Isniinta soo socota uu burrinayo heshiiska uu kula jiro Kooxda Kubadda Cagta Zenit St Petersburg ee dalka Ruushka. Tababaraha ayaa la sheegayaa in maalinta Isniinta ah uu joojinayo heshiiskiisa Zenit St Petersburg,waxaana la filayaa in 48 saac gudahood uu heshiis u saxiixo xulka Kubadda Cagta Qarankiiisa Italy. Kulamadii uu xagaagan maamulayay Kooxda Zenit St Petersburg waxaa uu ...
Laliga: 12,ciyaaryahan ee aan safan xagaaga oo dhan?
Horyaalka Dalka Spain ee Laliga ayaa sii dhamaanaya,waxaa la soo diiwaangeliyay 12 ciyaaryahan oo sababo kala duwan ku seegay kulamada sanadkan. 12ka ciyaaryahan midkoodna hal daqiiqo ma safan xilli ciyaareedka 2017/2018,waxaana loogu magaca daray kuwa la illaaway. Waxaana ka mid ah. Bruno Soriano (Villarreal): Dhaawac dartii. Emenike (Las Palmas, dhaawac dartii. Kike Sola (Athletic,labo xilli ciyaareed ma safan. Filip Manojlovic ...
UEFA oo ganaaxday Buffon
Xiriirka Kubadda Cagta Qaaradda Europe ee UEFA ayaa ganaax garka u suray goolhayaha waayeelka ah ee Kooxda Juventus Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon,ayaa lagu eedeeyay in uu aflagaadeeyay garsoore Michael Oliver,dhamaadkii ciyaar dhex martay Kooxaha Juventus iyo Real Madrid. Guddiga anshaha ee UEFA ayaa sheegay in Buffan uu u gefay garsooraha kuna kacay fal ka manuuc ah kubadda Cagta. Wxaa ay sheegeen in ...